တစ်ပတ်အတွင်း ရုံတင်ဇာတ်ကားများ (၁၆.၂.၂၀၁၈)
by yoelu . 14 Feb 2018 . 6:28 PM
အခရာရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ….မင်္ဂလာပါ။ ဒီတစ်ပတ်တော့ Black Panther ဇာတ်ကားရုံတင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပျော်စရာ ရက်သတ္တပတ်ကြီးပါပဲဗျာ။ ဒါ့အပြင် Deception – ဥပါယ်တံမျဉ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးလည်း ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ ၅ ပတ်မြောက် ရုံဆက်တင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Black Panther
Black Panther ကတော့ Marvel Comics ရဲ့ အသစ်စက်စက် Superhero ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Marvel Cinematic Universe (MCU) ရဲ့ ၁၈ ကားမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Ryan Coogler က ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Black Panther အနေနဲ့ Chadwick Boseman ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီကားဟာ Rotten Tomattoes ရဲ့ ချီးကျူးမှုအကောင်းဆုံးရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော်၊ မင်္ဂလာ(ဂမုန်းပွင့်-စံရိပ်ငြိမ်)၊ မင်္ဂလာစံပြ၊ မင်္ဂလာဒဂုံစင်တာ ၂၊ JCGV Junction City ၊ JCGV Junction Square၊ JCGV City Mall (St. John)၊ Mega Ace Cineplex (မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ကန်သာယာ)။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ထုံးစံအတိုင်းမြန်မာဟာသာဇာတ်ကားပဲ ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ ပြည်ဟိန်းသီဟရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ မင်းသားနေတိုး၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ မင်းသမီး ရွှေသမီးတို့အပြင် ဗေလုဝ၊ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံတို့လည်း မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဘယ်ရုံတွေမှာ ကြည့်ရှုလို့ ရမလဲဆိုတာတော့..
သမ္မတ၊ မင်္ဂလာ(သိမ်ကြီးဈေး)၊ ဂမုန်းပွင့် (လှည်းတန်း- စံရိပ်ငြိမ်)၊ မင်္ဂလာစံပြ၊ JCGV Junction City ၊ JCGV (St.John, City Mall)၊ JCGV (Junction Square)၊ JCGV (Maw Tin)၊ Mega Ace Cineplex (ဒေါပုံ၊ Capital)၊ (တာမွေ၊ ရွှေဗဟို)၊ (မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ကန်သာယာ)၊ (သာကေတ၊ မြရတနာ)၊နဝဒေး၊ မဟာမြိုင်၊ Red Radiance (လှည်းတန်း)။
ချစ်သောရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ !!! 💞💖💕ကမ္ဘာကျော်ရွာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ရက်( သောကြာ )နေ့မှစပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ရုံတင်ပြသသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွတ် စာမေးပွဲရက်အတွင်း ပင်ပန်းနေခဲ့တဲ့ သားသားတို့ မီးမီးတို့နဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိတ်သတ်များ တဝါးဝါးတဟားဟား ရယ်မောရင်း အပန်းဖြေလို့ရအောင်လို့ လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်👌✌
Posted by ကမ္ဘာကျော်ရွာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား on Friday, January 26, 2018
မြို့မ၊ မန်းနေပြည်တော် (ဆိုင်းတန်း)၊ မင်္ဂလာဒိုင်းမွန်း၊ JCGV Mandalay ၊ Mega Ace (မြို့ဂုဏ်ရောင်)။
Dimensions ကတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုနဲ့ နှစ်ပတ်မြောက်ရုံတင်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ ဒါရိုက်တာ ဥာဏ်ထင်ရဲ့ ရိုက်ကူးမှုနဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ကြယ်ပွင့်သစ်တွေဖြစ်တဲ့ ခါရာ၊ မင်းမြတ်စိုးစံ၊ Alice Ong ၊ ဂျာဆိုင်းအိန်တို့နဲ့အတူ ဦးဝင်းမြိုင်တို့ သရုပ်ဆောင်ထားကြပြီး ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကို မှန်းလို့ မရအောင် လှည့်ကွက်တွေအပြည့်နဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ Effect တွေ၊ CGI တွေလည်း တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားထားတာတွေ့ရတဲ့အတွက် မြန်မာကား တစ်ခါလာလည်း ဒါဆိုတာကို ငြီးငွေ့နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ Dimensions ကို ရုံမှာ သွာရောက်ကြည့်ရှုခံစားသင့်ပါတယ်။
JCGV (Junction City)၊ JCGV Junction Square၊ JCGV City Mall ၊ JCGV Maw Tin။ Mega Ace Cineplex (ဒေါပုံ၊ Capital)။
Dimensions မျက်နှာပြင်များ ရုပ်ရှင် နမူနာ
Posted by News Lodge on Saturday, February 10, 2018
ချစ်ပရိသတ်ကြီး…ဂျင်းကောင်ကတော့…ဂျပိုးလုပ်ပြီး တက္ကသိုလ်တစ်ကျောင်းလုံးကိုဘယ်လိုမွှေမလဲဆိုတဲ့ ကောလိပ်ဂျပိုးဟာ ဆရာဇဝနရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဒါရိုက်တာ ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး) က ရိုက်ကူးထားတာပါ။ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ မြင့်မြတ်၊ ခင်လှိုင်၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်၊ နေနော်၊ ငှက်ပျောကြော်တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကောလိပ်ဂျပိုးကို ဘယ်ရုံတွေမှာ တင်မလဲဆိုတာတော့…
ရှေ့ဆောင်၊ သွင်၊ မင်္ဂလာစံပြ၊ မင်္ဂလာဂမုန်းပွင့်- စံရိပ်ငြိမ်၊ Top Royal ( ပါရမီ စိန်ဂေဟာ)၊ မင်္ဂလာဝဇီရာ၊ JCGV (Junction City)၊ JCGV (Square)၊ JCGV (Mawtin)၊ Mega Ace Cineplex (သာကေတ၊ မြရတနာ)၊ (တာမွေ၊ ရွှေဗဟို)၊ (မြောက်ဥက္ကလာပ၊ ကန်သာယာ)၊ (ဒေါပုံ၊ Capital)။
မြို့မ၊ မင်္ဂလာဒိုင်းမွန်း၊ JCGV Mandalay၊ Mega Ace Cineplex (ချမ်းအေးသာဇံ၊ မြို့ဂုဏ်ရောင်)။
(၇)သန်းကျော် နမူနာကြည့်ရှုခဲ့သော ကောလိပ်ဂျပိုး""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""၉.၂.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါရုံများတွင်ပြသပြီး""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""မကြာမီစာမေးပွဲဖြေဆိုတော့မယ် ညီငယ် ညမငယ် တို့ရဲ့ ဘဝမှတ်တိုင် ဖြစ်တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်း၊တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘဝ တဝကြီးပျော်ရွှင်စွာကြည့်လို့ရပြီးနော်..စာကျက်လို့ ဦးနှောက်ပူ လာပြီးဆို ဦးနှောက်ဆေးဖို့ ပြေးကြည့်စရာကောလိပ်ဂျပိုး……..အလုပ်တွေဖိစီး စိတ်ညစ်စရာ ဘဝအမောတွေ ဖြစ်နေပြီးလား ကြည့်စရာကောလိပ်ဂျပိုးရှိတယ်..လိမ္မော်ရောင်ကျောင်းသားဟောင်း စကားဝါကျောင်းသားဟောင်းတွေ ပြန်ငယ်လာစေမယ့် ကောလိပ်ဂျပိုး…ချစ်ပရိသတ်အစုံ ကြိုက်နှစ်သက်စေရမယ့် ရယ်စရာ နဲ့ အတူ ကြေကွဲစရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ကောလိပ်ဂျပိုး လာပြီးနော်….စံချိန်တင် ရုပ်ရှင်ရုံ(၇၀) ကျော်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး…,,,,ကြိုတင်လက်မှတ်ဝယ်ထားမှစိတ်ချရမယ်နော်….#ရန်ကုန်ရှေ့ဆောင်၊သွင်၊မင်္ဂလာ(သိမ်ကြီးဈေး)၊ဂမုန်းပွင့်(လှည်းတန်း-စံရိပ်ငြိမ်)၊မြေနီကုန်းဒဂုံစင်တာ၊Top Royal ပါရမီ စိန်ဂေဟာ ၊ မင်္ဂလာစံပြ၊JCGV (junction city)၊JCGV (စိန်ဂျွန်း)၊JCGV (Juction Square)၊JCGV (မော်တင်း)Capital (သာကေတ)၊ရွှေဗဟို(တာမွေ)ကန်သာယာ(မြောက်ဥက္ကလာ) နဝဒေး၊မဟာမြိုင်၊မြရတနာ(သာကေတ)၊RedRadian(လှည်းတန်း) မြဟံသာ(သန်လျင်)၊ရွှေပြည်သာ၊PARADISO (မှော်ဘီ)#မန္တလေးမြို့မ၊မန်းနေပြည်တော်(ဆိုင်းတန်း) ၊မင်္ဂလာဒိုင်းမွန်း၊JCGV(မန္တလေး)၊မြို့ဂုဏ်ရောင်(mega ace) ပြည်-မင်္ဂလာထွန်းသီရိ၊မင်္ဂလာစံပြ (မကွေး)၊ပဲခူး(icon) ၊ ပဲခူး (မင်္ဂလာရွှေဟင်္သာ)#တောင်ငူ-New 3D Cinema မော်လမြိုင်- မင်္ဂလာဘုရင့် ၊JCGV ၊Paradiso ပခုက္ကူ-သီဟ ဖျာပုံ (Paradiso) ဘိုကလေး(Paradiso) သထုံParadiso အောင်ပန်း(Paradiso) ကျောက်ပန်းတောင်း(Paradiso) ရွှေဘို(Paradiso) မတ္တရာ(Paradiso)ကလေး(Paradiso )မုံရွာ(မင်္ဂလာမြစန္ဒာ၊မင်္ဂလာCineplex Ocean၊Paradiso) ၊မအူပင်(Paradiso) #ထားဝယ်(အောင်မင်္ဂလာ) #ပုသိမ်-ရွှေပြည်သာ မြဝတီ-သွန်းရွှေစင်#ဘားအံ-ဦးဆောက်ပန်း၊တက်နေဝန်း#နေပြည်တော်-JCGV၊အောင်သပြေ၊ဇေယျာသီရိ#မြိတ်-မြိတ်မင်္ဂလာ၊HELLO၊ဂုဏ်#လားရှိုး-သီတာအေး၊သိန်းထိုက်၊အောင်သီရိ#တောင်ကြီး-မြသုခ၊ Mega Ace (City Square) ၊Paradiso (အေးသာယာ)#ပြင်ဦးလွင်-movie planet ၊ချယ်ရီလွင်#ဗန်းမော်-စတား ရေနံချောင်း-ရတနာ#မိထ္ထီလာ-ဂရင်း မြင်းခြံ- မြေလတ်ဂုဏ်#မြစ်ကြီးနား-ဧရာ ၊
Posted by ကောလိပ်ဂျပိုး on Tuesday, February 6, 2018
ပုညခင်ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ဝတ္ထု “အနမ်းဝိုင်” ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီကားဟာ ဒါရိုက်တာ အောင်မြတ်ရဲ့ ရိုက်ကူးညွှန်ကြားမှုနဲ့ မင်းသား အောင်ရဲလင်း၊ မင်းသမီး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့နဲ့အတူ မင်းဦး၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ဇော်ဦး၊ ကျော်ကျော်၊ မျိုးသန္တာထွန်းတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ ဒီကားဟာ ၅၂၈ နဲ့ ၁၅၀၀ မေတ္တာကို အချိုးကျကျတင်ဆက်ထားတဲ့ ကားလို့ ဆိုပြီး တကယ့် Location တွေမှာ သွားရောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက် ဘယ်လို ထူးခြားမလဲဆိုတာတော့ ပိတ်ကားထက်မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါဦးခင်ဗျာ။
အနမ်းဝိုင် Official Trailer
ပရိသတ်များ စောင့်မျှော်နေတဲ့ " အနမ်းဝိုင် " ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ချစ်ရနံ့တွေထုံမွှန်းနေသော ဖေဖော်ဝါရီလ(2)ရက်နေ့ တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် တစ်ပြိုင်တည်းပြသပါတော့မည်#အနမ်းဝိုင် #kisslikewine #featurefilm #trailer
Posted by အနမ်းဝိုင် on Saturday, January 13, 2018
၆။ Padmaavat (3D)
ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကြိုက်သူတွေကတော့ ဒီကားကို စောင့်မျှော်နေကြမှာပါ။ ဒီကားကို ဒါရိုက်တာ Sanjay Leela Bhansali ရိုက်ကူးပြီး Deepika Padukone ၊ Shahid Kapoor နဲ့ Ranveer Singh တို့က အဓိကနေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ မော်ကွန်းတင်ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Padmavat ကို အခြေခံပြီး မေတ္တာဖွဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာတော့..
“ဥပါယ်တံမျဉ်“ကတော့ အထူးတလည်ညွှန်းစရာမလိုတော့ဘဲ ၅ ပတ်မြောက်ပြသခွင့်ရပြီဗျို့။ ဒါရိုက်တာ Christina Kyi ရိုက်ကူးပြီး ဇဏ်ခီ၊အောင်မြင့်မြတ်၊ သက်မွန်မြင့်၊ ထိုင်းမင်းသမီးလေး Kaew Karrovee ၊ မင်းဦးတို့လို နာမည်ကြီးတွေရော မျက်နှာသစ်သရုပ်ဆောင်တွေပါ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့” ဥပါယ်တံမျဉ် – Deception “ဇာတ်ကားကို အသစ်တွေ မျှော်လင့်နေတဲ့ မြန်မာကားပရိသတ်ကြီးက အများကြီး မျှော်လင့်နေခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်ရုံတွေမှာ တင်ဆက်ပြသမလဲဆိုတာတော့…
JCGV (Junction City) ၊ JCGV City Mall (St.John)၊ Mega Ace Cineplex (ဒေါပုံ၊ Capital)။
ဥပါယ်တံမျှဉ် ရုပ်ရှင် Trailer
Central Base Productions မှ ရိုက်ကူးပြီး မကြာခင်ရုံတင်ပြသမည့် DECEPTION (ဥပါယ်တံမျ ဉ်) ရုပ်ရှင် Trailer ပါ. မုဒြာရဲ့ခေါ်သံရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသား ဇဏ်ခီ၊ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီသက်မွန်မြင့်၊ အောင်မြင့်မြတ်၊ အကယ်ဒမီမင်းဦး ၊ထိုင်းမင်းသမီး Kaew Korravee၊ ခြူးစစ်ဟန် နှင့်ကျော်ကိုကိုဝေ တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပြီး ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားကတော့ Suspense Drama ပါ။ ဒီဇာတ်ကားကို ၃ လ ကြာ ရန်ကုန်၊ ငပလီ နဲ့ ကလောတို့မှာ သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး တနှစ်ကျော်အချိန်ယူတည်းဖြတ်ထားပါတယ်။ မကြာမှီရုံတင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော် !
Posted by Deception – ဥပါယ်တံမျဉ် on Tuesday, August 8, 2017
Winchester ကတော့ သဘာဝလွန် သရဲကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး Michael Spierig နဲ့ Peter Spierig တို့က ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Helen Mirren က အိမ်ကြီးရှင် Sarah Winchester နေရာက သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Jason Clarke နဲ့ Sarah Snook တို့ကလည်း သရုပ်ဆောင် အားဖြည့်ထားပါတယ်။
ဒါကတော့ အသစ်စက်စက်အိန္ဒိယ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ G.Ashok က ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ Anushka Shetty က ခေါင်းဆောင်နေရာက ပါဝင်ပြီး Unni Mukundan ၊ Jayaram နဲ့ Asha Sarath တို့ကလည်း အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေ နေရာမှာ ပါဝင်ထားကြပါတယ်။
JCGV (Junction City)။
သွင် – ဖုန်း – ၀၁ ၃၇၂၅၉၄ ၊ ၃၈၈၀၃၃ ။
နေပြည်တော် – ဖုန်း – ၀၁ ၂၅၁၂၇၇၊ ၂၅၁၂၈၈၊ ၀၉၄၅၇၈၄၂၈၈၂၊ ၀၉၄၅၇၈၄၂၈၈၃ ။
ရှေ့ဆောင် – ဖုန်း – ၀၁၂၅၂၁၁၃၊ ၃၈၈၀၃၄၊ ၀၉၄၅၇၈၄၂၈၈၀၊ ၀၉၄၅၇၈၄၂၈၈၁ ။
မင်္ဂလာ (၁) သိမ်ကြီးဈေး – ဖုန်း – ၀၁ ၂၄၃၀၅၇ ၊ ၂၄၃၀၅၈ ။
Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်) – ဖုန်း – ၀၉ ၇၇၉၀ ၅၄၆၇၁၊ ၀၉ ၇၇၉၀ ၅၄၆၇၂ ။
မင်္ဂလာ (2) ဒဂုံစင်တာ ၂ – ဖုန်း –၀၉ ၇၃၂၅ ၄၀၉၁ ၊ ၀၉ ၇၃၂၅ ၄၀၉၂ ။
မင်္ဂလာစံပြ – ဖုန်း -၀၉၂၆၀၈၈၇၀၃၅ ၊ ၀၉၂၆၀၈၈၇၀၃၆ ၊ ၀၁၂၃၀၃၁၆၅ ။
မင်္ဂလာ ဝဇီရာ– ဖုန်း – ၀၉ ၂၆၁ ၉၀၁ ၁၅၅၊ ၀၉ ၂၆၁ ၉၀၁ ၁၆၆၊ ၀၉ ၂၆၁ ၉၀၁ ၁၇၇။
JCGV (Mawtin) – ဖုန်း – ၀၁ ၂၂၅၂၄၄။
JCGV (Square) –ဖုန်း – ၀၁ ၅၂၇၂၄၁ ext ၅၀၁၆။
JCGV (Junction City) –ဖုန်း – ၀၁ ၉၂၅ ၃၅၉၁၊ ၀၁ ၉၂၅ ၃၅၉၂။
JCGV (City Mall, St. John) – ဖုန်း – ၀၁ ၃၉၅၄၃၂။
Mega Ace ကန်သာယာ – ဖုန်း – ၀၉ ၉၇၁ ၇၅၀ ၁၉၁။
Mega Ace ရွှေဗဟို – ဖုန်း – ၀၁ ၅၅၄ ၃၈၃။
Mega Ace မြရတနာ – ဖုန်း – ၀၁ ၅၅၆ ၇၈၂။
Mega Ace Capital – ဖုန်း – ၀၉ ၄၀၀ ၆၈ ၆၉၉၂၊ ၀၉ ၄၀၀ ၆၈ ၆၉၉၃။
ဝင်းလိုက် – ဖုန်း -၀၂ ၃၉၁၂၈ ၊ ၆၀၂၉၁ ။
JCGV (Mingalar Mandalay) – ဖုန်း – ၀၉ ၄၂၀၀ ၂၀ ၈၁၂။
မြို့မ– ဖုန်း – ၀၂ ၃၉၁၃၆ ၊ ၃၉၁၃၇ ။
Mega Ace မြို့ဂုဏ်ရောင် – ဖုန်း – ၀၂ ၆၀၃ ၆၅။
by yoelu .6months ago
by yoelu .3months ago
by phyuzin . 8 months ago
မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ (Mudras Calling)
ဥပါယ်တံမျဉ် – Deception